नत्र नयाँ कलाकारमाथि कसले... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
नत्र नयाँ कलाकारमाथि कसले खतरा मोल्छ? :सुपुष्पा
शुक्रबारबाट ‘रणवीर’की नायिकाको रूपमा सुपुष्पा भट्टको नेपाली रजतपटमा यात्रा सुरू हुँदैछ।
यसबारेमा उनी उत्साही भन्दा पनि ‘ब्ल्याङ्क’जस्तै छिन्।
‘अब एक्टर नै बन्छु भनेर मलाई पनि थाहा थिएन, मैले मोडलिङबाट सुरू गर्छु ठानेको थिएँ तर सिनेमा अचानक आइपुग्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘प्रशान्त ताम्राकारसँग फेसबुकमा कुरा भइराख्थ्यो। रणवीरको लागि नयाँ अनुहारको खोजी भइरहेको रहेछ। अडिसनको दिन भन्नुभयो। अडिसन दिएँ र छानिएँ।’
के बन्ने भनेर निश्चित नभए पनि सानोदेखिको उनको झुकाव भने ग्ल्यामरको दुनियाँतिर नै भएको देखाउँछ।
सानोमा उठ्दा घरमा नेपाली तथा बलिउडका गीतहरू बजिरहेका हुन्थे। गीतको तालमा सुपुष्पा मर्किन थाल्थिन्। भविष्यमा के गर्छु उनलाई थाहा थिएन तर स्टेजमा नाच्न र गाउन भने खुबै कस्सिन्थिन्।
यो बानीले गर्दा उनलाई आफ्नो परिवारलाई पनि छोरी रूची कता छ भनेर बुझेको लाग्छ। यसैले उनलाई यसमा रोकटोक थिएन। मोडलिङ गर्छु भन्दा कुनै विरोध खेप्नु परेन।
‘यता आउँछु त भनेको त थिइनँ तर उहाँहरूलाई थाहा भइसकेको हुनुपर्छ किनकि सानोदेखि स्टेजमा नाच्ने गाउने गरिरहेको हुन्थेँ,’ उनी भन्छिन्।
प्रशान्तको सल्लाहमा अडिसन दिएकी उनले फोनबाट नायिकामा छानिएको थाहा पाइन्।
‘बेलुका कल आयो तिमी छानियौं भनेर। बाबालाई सुनाएँ,’ उनले भनिन्।
यो खबर सुन्दा अक्सर धेरै उत्साहित हुन्थे होलान् तर सुपुष्पालाई भने ‘वाउ’ भनेर एकदमै एक्साइटेड अनुभव भएन।
‘यो कुराहरू पहिले नै कल्पना गरिरहेको भएर होला, मलाई वाउ भनेर एक्साइट गराएपछि अझै गर्न सक्छु फिल भएको थियो,’ उनले भनिन्।
उनलाई सिनेमाका निर्देशक गोविन्दसिंह भण्डारीले ‘मैले तिमीलाई काम गराउन सक्छुजस्तो लाग्यो त्यही भएर छानेको’ बताएका थिए।
अडिसनका लागि ‘प्रेमगीत’ सिनेमाको ‘के हो चान्स मारेको?’ भन्ने डायलगको तयारी गरेर गएकी थिइन्।
‘अडिसन दिन जाँदा यो चाहिँ मेरो फस्ट एण्ड लास्ट चान्स हो गर्न सकें भने अगाडि बढेँ बढिनँ भनेर आफूमा आत्मविश्वास ल्याएको थिएँ। म घरमा जसरी गरिरहेको छु त्यहाँ पनि त्यसरी नै गर्छु भनेर गएको थिएँ,’ उनले भनिन्।
आफ्नो आत्मविश्वासलाई कायमै राख्न होला अडिसन दिँदा उनले त्यहाँ कोही पनि छैन जसरी दिइन्।
‘गोविन्दसिंह भण्डारी सरले सुशील सिटौलासित एउटा सिन दिन पनि लगाउनुभयो। सिन अलि लामो नै थियो १० मिनेटमा छिटोछिटो डायलग घोकेर अडिसन दिएँ,’ उनले भनिन्।
त्यसपछि उनी सिनेमाको वर्कसपमा एक महिना बसिन्, सिक्ने जति सिकिन्। सुटिङमा अभिनय गर्दा उनलाई केही गाह्रो पनि भयो।
‘एक्टिङ गर्न अलिअलि गाह्रो भयो तर क्यामेरा फेस गर्न समस्या भएन। जब-जब टेक हुन्थ्यो म क्यामरा छ भन्ने बिर्सेर गर्थें,’ उनले भनिन्।
सिनेमामा छानिनुसँगै राम्रो कथा भएको सिनेमामा पाएको कुराले दंग पार्‍यो। त्योसँग सिनेमाका सिनियर सहकर्मीहरू उनलाई खुसी पार्ने अर्को कुरा थियो।
‘एकदमै लक्की फिल भयो, सिनियर एक्टरहरूसँग काम गर्दै थिएँ। सुवेक्षा दिदी र प्रशान्त सरको एकदमै ठूलो फ्यान। सुवेक्षा दिदीसँग मैले पहिले नै भेट गरेको थिए एउटा ट्रेनिङको सन्दर्भमा । इन्स्टामा पनि फलो गरेको थिएँ। एउटा मोडलिङ एजेन्सीमा जज बस्नुभएको थिए। उहाँसँगै काम गर्दैछु थाहा पाउँदा एकदमै खुसी भएँ,’ उनले भनिन्।
उनी आफूमा हिरोइनमा हुनुपर्ने गुणहरू रहेको मान्छिन्।
उनी भन्छिन्,‘ममा गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ। राम्रो नाच्न सक्छु, एक्सप्रेसन राम्रो दिन सक्छु।’
आफ्नो सबल कुरासँगै उनलाई आफूमा के कुराको कमी छ भन्ने पनि थाहा छ, जसलाई उनी विस्तारै कम गरिरहेको बताउँछिन्।
‘म बोल्नमा हुनुपर्ने जति कन्फिडेन्ट अझै पनि छैन्। बोल्न अलि डराउँछु। केही हुन्छ की भनेर डराउँछु। पहिलो प्रेसमिट हुँदा एकदमै डराएकी थिएँ, अहिले त्यो धेरै कम भइसकेको छ,’ उनले भनिन्।
सिनेमाको सुटिङपछि डबिङ हेर्दा उनी आफ्नो कामसँग आफैं चाहेजस्तो खुसी छैनन्।
‘डबिङमा हेर्दा छ्या भयो। आफूलाई डल फिल गरें अझ राम्रो गर्न सक्थेँ भन्ने भयो। ट्रेलर, गीत हेर्दा पनि त्यस्तै लाग्यो। अर्को सिनेमामा यसलाई कम गर्छु,’ उनी भन्छिन्।
सुटिङमा घामले गर्दा होला पूरा आँखा खोलेर अभिनय गर्न नसकेको उनले चाल पाएकी छन्।
भन्छिन्, ‘अब यस्ता कुरामा अब बढी ध्यान दिन्छु। अभिनय अझै सिक्नुछ।’
सुपुष्पा आफूले सजिलै सिनेमा पाएको ठान्छिन्। खास संघर्ष उनको भागमा परेन। संघर्ष गर्न परेन त्यो आफ्नो ठाँउमा छ। त्योसँगै उनलाई लाग्छ, ‘केही भएर त छानिए होला नत्र कसले नयाँ कलाकारमाथि खतरा मोल्छ? नयाँ मान्छेमा केही नदेखी छान्नु भएन होला। मलाई लिनु रिस्क नै थियो।’
मनमा सिनेमाले राम्रो गरोस्, मानिसले सिनियर कलाकारहरूको भिडमा आफूलाई नोट गरिदिउन भन्ने चाहना उनमा छ। अगाडि कता पुगिन्छ त्यो सोचेकी छैनन्। उनलाई लाग्छ, ‘अगाडिको बाटो राम्रो होस, गर्नुपर्ने मेहेनतमा अल्छी गर्दिनँ।’
पहिलो सिनेमाले राम्रो लक्षण देखाइरहेको छ। सिनेमा रिलिज नहुँदै, काम नहेर्दै उनलाई अन्य सिनेमाका प्रस्तावहरू आउन थालिसकेका छन्। केही राम्रा ब्राण्डहरूले उनीसँग काम गर्ने रूचि देखाइसकेका छन्। तर उनी अहिले ‘पर्ख र हेर’मा छिन्।
‘सिनेमाहरूको प्रस्ताव आएको छ अहिलेसम्म त कुनैलाई हुन्छ भनेको छैन। रणवीरको रिलिजपछि विचार गर्छु,’
रणवीरमा हिरोको प्रेमिका बनेकी सुपुष्पाको रूची एक्सन सिनेमामा छ। उनलाई एक्सन गर्न सक्छु भन्ने छ।
‘एक्सन गर्न मन छ। मैले जस्टिफाइ गर्न सक्ने जत्ति क्यारेक्टर गर्न मन छ। तर एक्सन गर्ने धेरै मन छ,’ उनले भनिन्।
आफ्नो काममा उनी आफूलाई ‘डल’ लागे पनि सिनेमामासँगै काम गरेका अग्रज कलाकारको प्रतिक्रियाबाट उनी खुसी छिन्।
‘टिकासरहरूले एकदमै राम्रो गरेको छ्यौ छोरी भनेर भन्नुभएको छ,’ उनले भनिन्।
सिनेनगरीमा सुपुष्पा नयाँ छिन्। सिनेनगरीका बारेमा उनलाई त्यतिधेरै थाहा छैन र सिनेनगरीलाई पनि उनको बारेमा धेरै थाहा छैन।
उनी आफूलाई एकदमै डरपोख मान्छिन्। भूतको कुरा सुन्दा उनको आङ सिरिङ्ग हुन्छ, ठूलो ताल खोला आदिको पानी देख्दा उनी निसासिन्छिन्।
‘मलाई के-केसँग डर लाग्छ। सानो-सानो कुरामा डर लाग्छ। मलाई पानीसँग हाइडरोफोवया छ। गहिरो र धेरै पानी देख्यो भने एकदमै निसासिन्छु। पोखरामा सुटिङ हुँदा मलाई ताल देखेर रिंगटा लागेको थियो। स्वमिङ पुलमा चाहिँ डर लाग्दैन। महाकालीमा सुटिङ हुँदा पानी कम भएकाले खास डर लागेन,’ उनले भनिन्।
उनी दर्शकहरूले ‘रणवीर’को कथा र सिनेम्याटोग्राफी दर्शकले धेरै मन पराउने उनको विश्वास छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १८, २०७५, १२:२२:००